LeadSift: Thatha iNjongo kunye nokuqonda okusebenzayo ngeMithombo yeendaba yoLuntu | Martech Zone
NgoMgqibelo, Agasti 29, 2015 NgeCawa, Agasti 30, 2015 Douglas Karr
Amashishini azama rhoqo ukufaka idatha kwithemba kunye nabathengi kuzo zombini ukufumana kunye nokutsala izikhokelo, kwaye emva koko ukugcina kunye nokuthengisa abathengi ababathengayo. Kukho itoni yetekhnoloji phaya ukuzama ukubamba le datha. Eminye imithombo ayichanekanga kwaye eminye iphelelwe lixesha.
Kubi kakhulu ukuba bekungekho mthombo wolwazi oqhubeka ngokuhlaziywa ngokuchanekileyo kwaye rhoqo ngabantu. Nantsi lapho! Abantu ngokungaguquguqukiyo nangokuphindaphindiweyo bashiya umkhondo wokuziphatha ochanekileyo kunye nokugqitywa kwedatha kunye neenjongo zedatha kwi-intanethi Imidiya yokuncokola. Yonke imihla kwaye rhoqo, ngeyure nganye okanye njalo.
Umsebenzi onzima kukucoca, ukuhluza kunye nokudibanisa idatha ukuze ube nokuqonda okunentsingiselo. LeadSift ukufezekisa oku, ukubonelela ngokuchanekileyo ngokuchanekileyo kwabasebenzisi beendaba zosasazo, indlela yokuphila, ubuntu, iimveliso ezilandelelweyo, indawo, ukusetyenziswa kwesixhobo, kunye nexesha lomsebenzi. Ixesha elingaphezulu, i-LeadSift inokukuxelela ukuba zeziphi iimveliso ungumthengi wakho, apho utya khona, apho uhlala khona, yeyiphi ithelevishini oyibonisayo, kwaye zeziphi iimveliso ozisebenzisayo.
I-LeadSift liqonga lobukrelekrele ekuhlaleni elinceda iqela lakho lentengiso ngokuqhubekayo ukuhambisa iwine ngomyalezo ofanelekileyo, umxholo, ubuchule, imithombo yeendaba kunye namava entlalontle kubathengi abafanelekileyo ngexesha elifanelekileyo.
I-LeadShift Yakha idatha yeNtlalontle yoLuntu usebenzisa la manyathelo alandelayo
Isikhafu -I-LeadSift ikhasa iinethiwekhi ezinkulu zentlalo ezimele ngaphezulu kwe-500 yezigidi zezithuba. Idatha yabo ihlaziywa qho ngomzuzwana, kwaye yenziwa ifumaneke kuhlalutyo olunzulu oluqhubekayo. Nanini na xa umntu evakalisa injongo yokuthenga imveliso okanye omnye okhuphisana naye; ibonisa kwideshibhodi yethu. Isalathiso se-LeadSift ngaphezulu kwesigidi se-180 sabona basebenzisi boluntu basebenzayo ukuze uqokelele ukuqonda okuvela kunye nokufikelela.
Hlela Okulandelayo, i-LeadSift ikwahlula idatha ejikeleze izinto ezibalulekileyo ezinje ngabathengi bakho, amathemba, imboni kunye ne-affinities. Usebenzisa ngaphezulu kweempawu ezingama-50 kwisicatshulwa, iigrafu zenethiwekhi, kunye nemeta-yedatha, i-Leadsift yomatshini wokufunda ialgorithms inokuhlela ukuba ngubani umntu, bathetha ngantoni kwaye bakuphi kuhambo lokuthenga. Ukusuka kula macandelo, i-LeadSift iqala ukwakha iimpawu zeprofayili ezinokuthi ziqhube imithombo yeendaba, uyilo, umxholo kunye neendlela zokuthengisa.
Ukukhupha -Umsebenzisi ngamnye oqokelelwe kwinkqubo ye-LeadSift, bakhupha ngaphezulu kweempawu ezili-100 malunga nabo, ukusukela kubalo lwabantu, i-psychographics kunye nolwazi lokuziphatha. Kwaye basebenzise kuphela idatha efumaneka esidlangalaleni, banokufaka kunye nokuqikelela iinjongo zomdla kunye nomdla ngokuchaneka okuphezulu. Olu luvo lwe-360-degree lomthengi lwenza ukuba ufikelele kubaphulaphuli kwintengiso ngemiyalezo enobuchule kunye nexesha elifanelekileyo kuzo zonke iindlela.
Cubungula Ngokudityaniswa kwedatha ebanzi kunye nokuqonda okwenzekayo, iLeadSift ityhila amathuba afihliweyo ukuze wenze izigqibo zokuthengisa. Ujongano lokujonga uphando olunomdla likuvumela ukuba uqhube ngokungagungqi kwidatha ukuze uchonge iintsingiselo kunye neepateni. Ukumelwa okubonakalayo kubonelela ngesishwankathelo esikwinqanaba eliphezulu lwentengiso yakho, iibhentshi zokukhuphisana, kunye neendlela zeshishini ngexesha lokwenyani.
kusebenze -Ukuthengisa ngentengiso kuthetha ukubeka idatha yethu kunye nokuqonda ukuba kusebenzele wena. Yahlula imiyalezo yakho enqamlezileyo kwaye ufikelele kubaphulaphuli bakho kuyo yonke indawo ngobuchule obuyimfuneko. Fezekisa uthethathethwano olwenziwe ngokobuqu kwinqanaba.
Idatha efunyenwe nge-LeadSift ihlawulisiwe kucwangciso lweendaba kunye nokuthenga, ukwahlulwa kwabaphulaphuli, ukuqonda okwenzekayo, ukulindela uhambo lomthengi kunye nokwenza umyalezo wobuqu kwithemba okanye kumthengi. I-Leadsift inikezela ngokubanzi API ukutyebisa iiprofayili zakho zedatha okanye ukwakha amava ahambelana nawe. Uvavanyo Zikhokele kule posi -Isixhobo sabo esisendaweni yethu.
Nalu ulwahlulo oluye LeadSift ikhutshwe kwiimveliso eziphambili kunye neeprofayili zazo ezilandelayo kwimidiya yoluntu!
Ukubhengezwa: Sinesivumelwano sokudlulisa esikhoyo ukuba uthatha isigqibo sokungena kunye ne-Leadsift.
tags: idatha enkuluyelayiniukuphuculwa kweprofayiliidatha yezentlaloimigodi yedatha yoluntuumkhondo wentlaloukuqonda kwezentlaloubukrelekrele kwezentlaloiqonga lobuntlolaIprofayile yentlalo
Iimpawu zoLuntu, i-SEO, kunye neempembelelo zabo komnye nomnye